चीनसग विवाद किन झिकियो ?
भरत दाहाल– आरजु राणा र शेरबहादुरको कोठामै एमसीसीको क्याबिनेट बैठक निर्णय भयो, संसदबाट पारित गर्ने निर्णय पनि त्यही बैठकमा भएको छ । विश्लेषक भरत दाहाल सोध्छन्– ओली दलाल हो कि शेरबहादुर सीआइएको एजेण्ट ? कि कर्मचारी को को हुन्, स्पष्ट पार्नुपर्छ । दाहालको चित्कार सुन्ने को ?
भरत दाहालको तर्क छ– रछ्यानमा सडेका मलहरूको चरित्रको जीवन्त नमूना हो यो । एउटाको सरकारले चीनसँग सिमा विवाद नभएको वक्तव्य निकाल्छ । अर्को अर्काको लागि अघि सर्छ र सिमा अतिक्रमण छानबिन समिति बनाउँछ । चीन र नेपाल स्वयंले हुम्लामा सिमा विवाद नभएको वक्तव्य निकालिसकेपछि यो छानबिन समिति कसको उद्देश्यका लागि ? ईण्डियाले ६४ हजार हेक्टर जमिन लुटेको प्रश्नलाई कहिल्यै मुद्दा नबनाउने, संसदबाट पारित लिम्पियाधुरा नक्शा प्रकाशित नगर्ने र जयसिंह धामीको हत्यालाई आरजुको राखिसँग सौदाबाजी गर्नेहरूले कसका लागि चीनसँगको विवादको स्याल हुईय्याँ चलाउन खोजेका हुन् ?
हुम्लामा सिमा अतिक्रमण भएको हो भने शेरबहादुर र आरजुले ओली माथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउँछन् कि चलाउँदैनन् ? सरकारी खण्डन आउँदा आउँदै छानबिन समिति बनाउने प्रम देउवाले अतिक्रमणलाई पुष्टि गर्न सकेनन् भने यिनीहरूलाई दण्ड दिनु पर्छ कि पर्दैन ? अफगानिस्तानबाट फर्कनु परेपछि विक्षिप्त भएको सिआइएले एमसीसी लाई अगाडि बढाउन नेपालीहरूको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि छानबिन समिति बनाएको यथार्थतामा कुनै शंका छैन । यो सबै एमसीसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणलाई सफल पार्न सिआइएले दिएको होमवर्क मात्र हो ।
यो सरकारले तत्काल लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्शा प्रकाशित गर्नुपर्छ । निर्मला, गोबिन्द गौतम र जयसिंह धामीका हत्याराहरूमाथि कार्वाही गनुपर्छ । नेपाली हुँ भन्ने हो भन्ने लाग्छ भने अब देखिनुपर्छ, हेक्कारहोस्, जुलिया चाङ ब्लकको रगतले नेपालको भू–राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाउन सक्नेछैन ।